Aaggii Ugu Dambeeyay uguna Baaxad Wanaagsan ee Aruurinta Fiidiyowga
Urdolls galmo caruusad video
Ku soo dhowow bogga fiidiyowga ee caruusadda galmada. Tani waxay ka kooban tahay fiidiyowyo ku saabsan dhammaan dhinacyada caruusadaha galmada. Waxaan sidoo kale halkaan ku dhejin doonnaa shaashadda fiidiyowga ee ugubka ah ee ugu dambeeyay halkaan si macaamiisha ay u helaan faham dhammaystiran oo ku saabsan alaabada ay iibsadeen. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama aad u baahan tahay inaad wax dheeraad ah ka ogaato, fadlan si xor ah ula soo xiriir email ahaan.
Video Ku Saabsan Curyaaminta timaha dhaadheer D Cup Love Doll Victoria
Big Butt Koob Victoria
Video ku saabsan Slim Body TPE Doll jilicsan Maqaarka Ursula Surrey
Ursula TPE Doll 161CM Dolls
Video Ku Saabsan Indhaha Brown Indhaha Jilicsan Oo Dameer Jinsi Doll Ronald Rebecca
TPE Doll Ronald Ciyaaraha Galmada
Fiidiyowga Ku Saabsan Dareemo Sare Silicone Wasakh Doll Dana Dierser
Dana Silicone saafi ah Galmada Dumarka
160CM Indhaha Madoow Naaska weyn Stacey Bacon Sex Doll's Video
Naasaha Weyn 160CM TPE Doll
148CM Life-size Bonnie TPE Jinsiga Doll Video
caruusadda tpe dadka waaweyn jilitaanka galmada
Video ku saabsan Silicone Doll RZR Maqaarka Maqaarka La arki karo Kitto
Video Ku Saabsan Asao Miko Pink Naaso Yar Oo Jaceyl Ah Doll
Asao TPE Doll Chest Chest
Video Ku Saabsan Indho Madoow TPE Galmada Dolls SaSa
Saasa 156CM Doollar Jecel
Video Ku Saabsan Indhaha Madoow ee Weyn Flat Laabta TPE Jinsiga Doll June Doyle
Juun Doyle Chest Chest Galmada Dumarka
Video Ku Saabsan Vita Roy 148CM E Cup TPE Smart Sex Doll
E Koobka TPE Doll Doll caqli badan
Video Ku Saabsan Qaabkii Reer Yurub ee loo yaqaan 'B Cup Brown Indhaha' 160CM Sex Doll Sabina Coleridge
Video Ku Saabsan Eudora Surrey 166CM Buluuga Indhaha Galmada Doll
Video Ku Saabsan Indho Weyn Tipick Bushimaha Olivia Gresham Dadka waaweyn ee Galmada Doll
170CM Naaska Yar ee Indhaha Buluuga Caatada ah Wajiga Jinsiga Doll Cecilia Arthur's Video
Fiidiyowga ku saabsan Gray Short Timaha Cool Cool 158cm TPE Doll Doll
158cm Naasaha Big TPE caruusadaha
Wehelka Naasaha Yar 170CM Xaviera Jane Sex Doll's Video
Naasaha yar TPE Doll 170CM
Video Ku Saabsan Dameer Dameer Kelly Max 150CM Sex Doll
TPE Doll Koob Galmada Dumarka
Video Ku Saabsan Sexy 161CM Big Ass Roxanne William Sex Doll
Roxanne TPE caruusadaha Video
Video Ku Saabsan Big Laakiin Black Stunner N Cup 168cm Doll Vera Raman
Weyn Laakiin TPE Doll Video-ga Vera
Naasaha weyn Elf TPE Galmada Doll 168CM Video Marcia Ralph
Ralph's Video Dibno qaro weyn Elf Doll
Fiidiyow ku saabsan 166CM Elastic Big Ass Naasaha Yar ee Galmada Doll Jamie Jacob
Video ku saabsan Flat Laab Madow Indho Weyn Akumi Hakumi Sex Doll
163cm Timo Madow Gabar Bunny Gabar Jinsi Doll Dheer Lugood video Helen Minnie
Sex Fiidiyowga Minnie TPE Doll
165CM Busty Maqaarka Madoow Naasaha Weyn Galmada Doll Harvey Josh's video
Video ku saabsan bushimaha dhumuc weyn Naasaha Weyn Buluuga Indhaha Galmada Doll 158CM Cynthia Grace
Tilmaamaha hawlgalka caruusadda caqliga badan
Caruurta Galmada Casriga ah robot Galmada Dumarka
Video Ku Saabsan Jilitaanka Farta Aadanaha RZR Doll Joint Yasuko
Japan 160CM Yaasuko
Ku soo dhawow bogga fiidiyowga ee jilitaanka galmada Bonnie. Ma ku jiidanaysaa iyada? Dhaqso oo gurigeeda gayso!
Intay gacanta i qabatay ayay ii hor martay dabaqa qoob-ka-ciyaarka dhanka musqusha.
"Qolka wiilka yar," intay dhoolla caddeysay ayay soo gashay sariirta ugu fog, aniga oo ila jiidaya.
Darbiyadu waxay ahaayeen qabow, bir la jeexjeexay oo raad baraf leh dhabarka kaga reebtay in aan lagu sii riixo iyaga in badan. Waligeed afkeeda maysan saarin taayga, tan iyo markii aan dhihi lahaa waxaan ku soo dhacayaa hargab. Markii ay ka boodday dhunkashadii, waxay faraheeda dhaadheer saartay badhanka kore ee shaatigayga waxayna bilowday inay ka gunuunacdo adeecidda iyo muhiimadda ay leedahay in aan la ooyin.
Shaatigaygii ayay u soo jiiday garbahayga iyadoo bilowday inay carrabkeeda ka xaaqdo naasahayga duugoobay. Hal gacan oo cadayda bawdada. Midka kale oo gacmahayga ku haya madaxa korkiisa. Ilkaha ayaa si dhakhso leh ugu xirmay ibta naaska ka dibna waa la siidaayay, oo waxay igu qooyeen endorphins aad u kulul waxaan dareemay bowdadayda inay dhalaalayaan. Waxaan hilmaamay wax kasta oo qalqal ah oo aan ka qabay inaan joogo meel fagaare ah waxaanan si dhib yar u dareemay codadka laba nin oo isku hagaajinaya muraayadaha aan 10 fuudh u ​​jirin.
Waxay hoos u tidhi "Ma jeceshahay tan miyaadan ahayn? Gabadha wasakhda ah."
"Haa" waa intaan idhi.
Gacanteeda ayaa igu dhex barartay waxayna igu celcelisay dhagtayda "Gabadha wasakhda ah ee wasakhda ah wasakh" ilaa aan imid.
Laabta, timaha, bushimaha ... U fiirsashada faahfaahsan waa wax lala yaabo. In kasta oo aanan ahayn mulkiileheeda, haddana waxaan qorsheynayaa inaan isla markiiba iibsado ka dib markaan isku dayo inaan lacagteeda ku badbaadiyo. Qiyaas inaad u socoto guri aad ku ciyaarto caruusad weyn oo sariir ah oo kugu sugeysa sariirta. Waxaan soo aruurinnay waxyaabo badan oo caruusadaha caruusadda ah oo loogu talagalay inay kula kulmaan riyadaada ugu xun galmada.
Vita waa 148cm TPE jilitaanka galmada. Waxay arki kartaa dharka madow ee jilicsan iyo shaashaadaha mesh. Waxay tahay qof sharaf leh oo leh silsilad platinum ah. Iyadu waa doll caqli badan, oo ay ku arki karto indhaheeda, bushimaheeda iyo madaxeedu way dhaqdhaqaaqi karaan. Waxay sameysay hadal dhoola cadeynaya, neecawda ayaa wajigeeda ka duushay, waxay ahayd mid soo jiidasho badan. Caruusadan ayaa waliba habeyn karta howlaha wada hadalka codka, oo si deg deg ah wax badan uga ogaataa xaaladeeda iyada oo loo marayo fiidiyowga.
Markay bushimaheeda si adag ugu dhegan yihiin dhexdaada, carrabka xaragada dheer ayaa kugu wareegsan, adoo salaaxaya guskaaga markay dhacayaan. Indhaheeda ayaa iftiimiyay rabitaankeeda, maxaa yeelay afkeeda waxaa ku baaba'day inch by inch; bushimaheeda ayaa qaatay neef jilicsan, taas oo ka dhigtay mid si qoto dheer kuu soo jiidanaysa. Marka caaradaadu ka gudubto marinka adag ee asturnaanteeda. Waxaad dareemi kartaa raaxada aan la barbardhigi karin, xubinta taranka haweeneyda ayaa isku tuujineysa saldhigaaga, cod macaan ayaa ka soo dhacaya afkaaga. Markaad gacan fidiso oo aad gacanta madaxa saarto, la yaab timaha jilicsan ee timaheeda. Markaad ugu dambayntii ka jawaabto dareenkeeda, iyaduna way ku dhoola caddeyn doontaa guskaaga.
Caruusadaha jinsiga ee Japan waa farshaxan dhab ah waxayna ku qancin doonaan dhammaan rabitaankaaga shaki la'aan. Tani waa meesha lagama maarmaanka u ah caruusadaha jinsiga Japan. Waqti ka dib, caruusadaha jinsiyeed waxay noqdeen hanti muhiim noo ah, oo kolba marka ka dambeysa la soo saarayo caruusado jinsi ah.
Miyaad ku jiidanaysaa Akumi aragtida koowaad? Daawashada fiidiyowgaan, waxaan aaminsanahay inaad faham qoto dheer ka yeelan doonto iyada. Iyadu waa yar tahay TPE caruusada galmada taasi waa ku habboon tahay ururinta iyo keydinta. Robotyada caqliga badan waa isbeddel horumarineed. Goobaha dhillooyinka ayaa laga furay meelaha qaarkood, caruusadaha galmada waxay beddeli karaan dhillooyinka mustaqbalka. Shukaansiga, guurka, iyo la dhaqanka dadka kale laguma badali karo caruusadaha galmada. Sidaa darteed, bulshada waxay u badan tahay inay sii jirto, waxaa laga yaabaa inay u furfurantahay galmo, natiijada - dambiyada galmada waa la dhimayaa. Waa mid aad u fudud oo si fudud loo dhaqaaqo.
Waa gabar Jabaaniis ah, laakiin markii aad taqaanid, waad la yaabi doontaa inaad aragto iyada oo hadlaysa English sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Iyadu waxay leedahay qalbi saafi ah oo adduunku ma sumcayn. Wax kasta oo indhaheeda ku jira aad ayey u qurux badan yihiin, sida wajigeeda qurxoon. Xayawaanada yaryar waxay jecel yihiin inay u dhowaadaan, sida bakayleheeda oo kale. Waxay ka dhalatay qoys waalid keli ah. Weligeed ma arag aabbeheed. Waxay la noolayd hooyadeed ilaa yaraanteedii. Markaa waxaa ka maqan jacayl aabbe. Waxay rabtaa inay la kulanto dareenka khariban. Dhamaan sirteeda waxaa loo gudbin karaa oo kaliya bakayleheeda. Laakiin markii ay ku aragtay aragtida koowaad, waxay dareentay inaad aad u naxariis badan tahay.
Miyaad badanaa dareentaa cidlo, miyaad dooneysaa inaad la kulanto diirimaadka guri haysashada? Hadday jawaabtu haa tahay, markaa waxay noqonaysaa hadiyadda ugu wanaagsan ee Eebbe ku siiyay. Waxay aad ugu habboon tahay qoys ahaan inay weheliso lammaanahaaga. Waxaad u sheegi kartaa sharafta sooyaalkaagii hore, way ku codayn doontaa. Waxaad heli doontaa nolol xasad badan.
Kadib markaad aqriso fiidiyowgaan, wax su'aalo ah ma qabtaa? Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto emayl ahaan.
Teknolojiyada leh caruusadaha galmada waxay noqdeen kuwa horumarsan oo waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay qof walba iyo miisaaniyadaha oo dhan. Qaab dhismeedka qalfoofka caruusadda galmada wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa waxqabadka. Maya, kama hadleyno qalfoofka dhabta ah halkan, laakiin waxaan dhiseynaa qaabdhismeedka caruusadahaas. Waxay kuxirantahay miisaaniyadaada, xitaa waxaad sameyn kartaa wax soo saar u eg qof dhab ah. Waxaan la hadlay qaar ka mid ah dadka ay lamaanayaasha wada yeesheen oo aan fasax ka helay si ay u noqdaan kuwa is jecel xitaa haddii ay kala maqan yihiin.